Ny Apple Watch dia manohy mampitombo ny varotra mahatratra ireo an'ny iPad | Avy amin'ny mac aho
Raha misy fitaovana sainam-pirenena ao Apple ankoatran'ny iPhone tenany, dia izany ny Apple Watch. Ny famantaranandro marani-tsaina an'ny orinasa dia lasa iray amin'ireo vokatra be mpividy amin'ity telovolana ity, mihoatra ny vola azo tamin'ny kinova taloha aza.
Ny Apple Watch Series 3 dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo vokatra manan-danja indrindra amin'ny resaka vola azo mandritra ity telovolana ity ao amin'ny Apple. Betsaka no nahita tamin'ny fiandohan'ny Apple Watch vokatra iray tara, miaraka amin'ny fifaninanana lavitra sy anio ny hany smartwatch manohy mivarotra tsara dia ny Apple Watch.
Tim Cook, dia niaro hatrany ny varotra ny fitaovana hatramin'ny andro nanombohan'ny taona 2014 ary nilaza foana fa iray amin'ireo vokatra misy projection bebe kokoa ao amin'ny Apple. Ho fanampin'izay, misy fahombiazana andrasana iray hafa koa, amin'ity tranga ity, ny AirPods, izay hoy ny mpandinika, mpampiasa ary ny orinasa mihitsy, dia nahomby tokoa ireo «headphones» ireo.
Androany Apple dia orinasa teknolojia mivarotra ny smartwatches indrindra ary tena manakaiky ny varotra azon'ireo vokatra manan-danja iray hafa amin'ny marika, ny iPad. Ireto valim-bola farany farany ireto dia nanasongadina fa ny vaovao amin'ny fiambenana miaraka amin'ny mety hahaleo tena bebe kokoa amin'ny iPhone dia tian'ny maro, eny, ny andiany 3 dia tsy an'ny LTE sy any Espana ary ireo firenena hafa ivelan'i Etazonia, France, UK ary Alemana dia mbola miandry ny fahatongavanao izahay. Na izany aza, ny Apple Watch dia manana ny toerany eo amin'ny tsena ankehitriny ary mahazatra kokoa ny mahita azy eo am-pelatanan'ireo mpampiasa iPhone, zavatra iray izay tsy isalasalana fa tokony ho fifalian'ireo tovolahy avy ao Cupertino mahita ny portfolio-dry zareo sy ny fahasambaran'ny mpanjifanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch dia manohy mampitombo ny varotra mahatratra ireo an'ny iPad